Sidee Waxaad GIFs ka YouTube Videos Si fudud Samayn Karaa
> Resource > YouTube > Sida loo sameeyo GIF ka Video YouTube ah
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, GIFs ayaa sii badan oo caan. Had iyo jeer hab fiican si ay u muujiyaan animation si deg deg ah oo aan wax kor u badan oo meel, GIFs ayaa noqotay il weyn ee madadaalada. Ku-simaha sida buffers u qosol badan, farriimo la xidhiidha oo kaliya oo ku saabsan wax kasta oo aad ka fikiri karaa, GIFs yihiin ballaaran oo caan ah - oo dhab ahaantii aad u fudud in la sameeyo.
Turning video ah YouTube, ama qayb ka mid qaar ka mid ah waxaa ka mid ah, soo galay GIF clip ah dhab ahaantii waa mid aad u fudud. Taas macnaheedu waxa weeye in aad tusi kartaa asxaabtaada, alaabtii lagu qoslo oo aan haysan si ay u tagaan gal ah inta laga mamnuucay in shaqada YouTube. Sabab kasta aad rabto in aad GIF ah, waxa ay hadda si fudud badan abid. Halkan waxaa ku qoran laba xal oo kaa caawin doona.
Xalka 1: Download iyo badalo YouTube videos in GIF
Solution 2: Iyadoo qalab jiilka GIF
Talaabada 1: Download YouTube videos
Download wax videos YouTube iyo playlists si fudud oo dhakhso ah
Tallaabo 1: Ku rakib barnaamijkan
Talaabada 2: Raadi YouTube videos
Talaabada 3: Download YouTube videos dhex button Download ama iyada oo koobi ka dibna riix badhanka URL koollada url video ah.
Halkan waa hage faahfaahsan .
Talaabada 2: leexo ka soo bixi YouTube videos in GIF
Hadda, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo aad file video galay animation GIF ah. Si tan loo sameeyo, si fudud booqo Zamzar . Zamzar waa aalad diinta online taas oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan, iyo qaadataa dhawr ilbiriqsi. Waxaad si fudud u geliyaan faylkaaga video bixi iyo doorato qaabka sida GIF. Markaas geli e-mail oo guji Beddelaan .
Xalka 2: Iyadoo qalab jiilka GIF
Si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa GIFs waxa ay si sahlan kula qaar ka mid ah qalabka kale ee halkaas. Haddii aad isku aragto si joogto ah qosol ee "GIFs Reaction" in dhammaan muuqan internet-ka maalmahan, ka dibna waxaad ka heli kartaa naftaada lug arrimuhu maanta fudayd buure.
Sida aan kor ku qeexan, samaynta GIF ah waa fud. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qalab badan oo kala duwan oo aad la xiriiri karto si aad baaris lagu sameynayo qososhay qof walba. Halkan waxa ku jira qalabka. Just leeyihiin isku day ah.
Imageflip waa website cabsi badan kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan GIF ka wax video halkaas. Haddii in uu yahay YouTube ama file ah oo ka PC u gaar ah, waa gebi adiga. Waxaa markaas abuuray animation ah Sargo'an si aad u samayn kartaa dareen-celin ku fiican in xaalad kasta oo la siiyo!
GIFSoup waa goobta cabsi online oo kuu ogolaanaya inaad si ay u sameeyaan video kasta YouTube galay GIF ah. Waxay qaadatay dhawr ilbiriqsi oo ka tagi doono watermark ku saabsan GIF, ee ha u adeegsan kasta oo u baahan xirfad laga yaabaa in aad leedahay.
Tani, sida GIFSoup waa wax ku ool ah oo degdeg ah caleemo watermark weyn. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isku xirno account in xisaabta Facebook ama Twitter ah markaas aad leexan karno xanuun iyo saaro watermark ah!
Sida aad arki karto, samaynta GIFs weligii fudud. Waagii hore waxaa loo baahan yahay shaqo badan oo dhex Photoshop iyo software la mid ah si ay u helaan wax walba oo kaliya xaq u leeyahay. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, ayaa maanta waxaan isticmaali kartaa software caqli badan taas oo dhamaan shaqadaas adag oo ka soo baxay waxaa ka mid ah annaga iyo ina siineysa fudud ah si ay u isticmaalaan oo wax ku ool ah line of software.
Sidaas, marka xigta aad si fudud u leeyihiin in ay ka mid Jim Carrey jiidaya wajiga u qosol badan in shaqo oo e-mail, aad sidaas leh oo kaliya dhowr daqiiqo sixiddiisa samayn kartaa!